Intliziyo yeGeorgian Bay - I-Airbnb
Intliziyo yeGeorgian Bay
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguStephen/Valeriya
UStephen/Valeriya ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo ekhethekileyo kwaye ekhethekileyo. Indlu entsha eyi-3000+ sq ft eyilwe ngobuchwephesha kwaye yakhiwe ijonge enye yeendawo zaseGeorgia ezimangalisayo zePointe au Baril. Amagumbi okulala ama-6 kumaqela amakhulu okanye amancinci, kwaye abekwe ngaphesheya kweSturgeon Bay Provincial Park enikezela ukufikelela elunxwemeni kunye neendwendwe eziphuphumayo ezinokuhlala kwinkampu kwaye zihambe okanye zidade ziye kwi-cottage. Ulungiselelo olugqibeleleyo lokudibana kosapho.
Le cottage inkulu kwaye ivulekile. Uyilo lolwangoku kwaye lustic, kunye nezinto eziluncedo zepropathi ekumgangatho ophezulu. Iifoto ziyakhohlisa, i-cottage oyibona kwiifoto ezininzi yiGumbi elikhulu. Kukho igumbi lokulala elinemigangatho emi-2 elifihlwe ngasemva. Ikhitshi inkulu. Iindawo zomlilo zeGranite, zihlolwe Igumbi leMuskoka elinendawo yomlilo, i-gas cooktop, iifriji ze-2, amanzi aphilileyo, amagumbi okuhlambela e-3, i-air conditioning, i-satellite TV, i-dock yesikebhe, i-fire pit.. I-Cottage ifikeleleka kwindlela.
Amathoyizi amanzi abonelelweyo: iphenyane, ii-SUP zabantu abadala, iibhodi zabantwana, kunye nephenyane le-aluminiyam ene-15hp motor! I-Pointe au Baril lichweba elimangalisayo leziqithi, ezisasazeke kakuhle kunxweme lweGeorgian Bay (iLake Huron). Umsebenzi ophambili kukuhlola iziqithi, ukuloba, ukuqubha, kunye nokuxhoma nje. Kwabanomdla, kukho ukufikelela kwamanzi kwiziqithi yonke indlela eya kumanzi avulekileyo eLwandle oluKhulu.
Indawo yasePointe au Baril inembali etyebileyo. Kukho iincwadi ezithetha ngalo mbandela kwithala leencwadi elilungiselelwe nina bafundi. Imbali ibandakanya abaphandi bokuqala (i-Champlain ihlolisise indawo ngo-1615!), Ixesha lokugawulwa kwe-frenetic, kunye nebala lokudlala labatyebi nabadumileyo ... kusenjalo. Abo banengqiqo nabakhaliphileyo phakathi kwenu baya kuvuzwa ngokutyebileyo. Ukuba unephenyane elinobuchule, iGPS yaselwandle, kunye nesakhono sokuhamba ngesikhephe, lo mmandla unezona ndawo zinomvuzo nezinomvuzo wokuphononongwa. Yimayizi yokwenyani yeendlela kunye neendlela, ezijikelezwe yimida yegranite yaseCanadian Shield yakudala, kwaye uninzi lwamanzi acwengileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Stephen/Valeriya
Le yindlu encinci kwaye uya kuba wedwa. Umnini uhlala kude kodwa uya kwenza konke okusemandleni akhe ukujongana nayo nayiphi na imiba. Kodwa ukuba kukho into eqhekekileyo, kusenokufuneka ube nobuchule uze usebenzele ukuyilungisa. Injalo indalo yobomi be-cottage!
Le yindlu encinci kwaye uya kuba wedwa. Umnini uhlala kude kodwa uya kwenza konke okusemandleni akhe ukujongana nayo nayiphi na imiba. Kodwa ukuba kukho into eqhekekileyo, kusenoku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pointe au Baril